SUPPORTMM November 08, 2021
ကမ္ဘာပြားပြီ ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ၊ အင်တာနက်နဲ့ နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေက ကမ္ဘာကြီးကို ဆွဲချုံ့ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြင်ညီကွင်းကြီး ဖြစ်သွားပါပြီ။ သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကမို့လို့၊ သူကတော့ ကိုရီးယားကမို့လို့ဆိုတဲ့ ခြွင်းချက်တွေ ထည့်စဉ်းစားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးဟာ တစ်ပြေးညီတည်းပဲ ပြိုင်ဆိုင်ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းထဲ ပိုဝင်ဆံ့လာတဲ့အချိန်မှာ အခွင့်အလမ်းတွေလည်း များလာမှာ ဖြစ်သလို၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်း ပိုပြင်းထန်လာတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ ပညာတတ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်က သယံဇာတ ဘယ်လောက်ကြွယ်ဝသလဲဆိုတာကို ကြည့်တဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ပညာတတ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာက အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကို အဓိက အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ Knowledge ဆိုတာကို ဗဟုသုတလို့ပဲ မှတ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ခုခေတ်မှာတော့ ပညာလို့ ပြောင်းလဲသုံးနှုံးနေကြပါတယ်။ Knowledge နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဖတ်ဖူးတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုကတော့ “Knowledge = Education + Experience” ပါ။ ပညာဆိုတာ အသိပညာနဲ့ အတွေ့အကြုံတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုက အပြန်အလှန် ဆက်စပ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ မပါတဲ့ အသိဟာ မပြည့်စုံသလို၊ အသိတစ်ခု မယူနိုင်လိုက်ဘူးဆိုလည်း အဲဒီ အတွေ့အကြုံဟာ အလဟဿပါပဲ။
အရင်ဆုံး Education က စပြောချင်ပါတယ်။ ၃ မျိုးရှိပါတယ်၊ Formal လို့ခေါ်တဲ့ ကျောင်းပညာရေးရယ်၊ Informal လို့ခေါ်တဲ့ အမေက သမီးကို ဟင်းချက်နည်းသင်ပေးတာ၊ အဖေက သားကို ကားမောင်းသင်ပေးတာ၊ အဲ့လိုပညာရေးမျိုးရယ်၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Non-formal education လို့ခေါ်တဲ့ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးပေါ့။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုလေး သတိထားစေချင်တာကတော့ ဘီလ်ဂိတ်စ်တို့ စတိဗ်ဂျော့ဘ်စ်တို့ ဇူကာဘတ်တို့ ဘွဲ့မရတာ မှန်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ Non formal education မှာ တအားထူးချွန်ခဲ့လို့ ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပါ၊ သူတို့လည်း ဘွဲ့မှ မရတာ ဆိုပြီး အတုယူမမှားစေချင်ဘူး၊ Non-formal education မှာ ကြိုးစားခဲ့တာကိုသာ အတုယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ သူများသင်ပေးမှ ရတော့မပေါ့ ဆိုတာမျိုးတွေ မတွေးကြစေချင်တော့ဘူး။ ဆရာဆိုတာ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဆရာအပေါ်မှာ လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုနေတာမျိုးတွေက ဒီခေတ်မှာ မဖြစ်သင့်တော့ဘူး။ တကယ်တော့ ပညာတတ်တယ် ဆိုတာဟာ ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခု၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်တစ်ခု ရတာထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။
စာမတတ်သူ ပပျောက်ရေး ဆိုပြီး တစ်ချိန်က လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း ဘယ်လောက် ဆိုပြီးလည်း ဂုဏ်ယူခဲ့ကြဖူးတယ်။ စာမတတ်သူပပျောက်ပြီးရင် စာမဖတ်သူ ပပျောက်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ် လို့လည်း ပြောတာကြားဖူးပါတယ်။ မဟုတ်သေးဘူး၊ စာမတတ်သူတွေ မပပျောက်သေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ခုခေတ်မှာ နောက်ထပ် Literacy နှစ်ခု ထပ်တိုးလာလို့ပါပဲ။ Global literacy နဲ့ Digital literacy။ နိုင်ငံတကာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ နည်းပညာ အသုံးပြုနိုင်မှု။ ဒီနှစ်ခုလည်း ပိုင်ဆိုင်တော့မှ အဲဒီလူကို စာတတ်တယ်လို့ ခေါ်နိုင်တဲ့ခေတ် ရောက်နေပြီ။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာစကားကို နှစ်မျိုး သုံးမျိုးလောက် သင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ တစ်မျိုးတည်းတောင် တော်တော်လုပ်နေကြရတုန်းပါ။ ကမ္ဘာသုံး ဘာသာစကားလည်း ဖြစ်တယ်၊ စာတော်တော်များများကို ဒါနဲ့ပဲ ရေးထားတယ်၊ လူတော်တော်များများလည်း ဒါနဲ့ပဲ ဆက်သွယ်ကြ၊ ပြောကြ၊ ဆိုကြတယ်။ ဒီတော့ သူတို့တွေကြားထဲ တိုးချင်ရင် ကျွန်တော်တို့မှာ တခြား ရွေးစရာ မရှိပါဘူး။ အဲဒီဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာပါပဲ။
အဲဒီ Global literacy အပြင် Digital literacy လည်း တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဖုန်းမှာ zapya နဲ့ ဖိုင်လေးတွေ ပေးတတ်ယူတတ်ရုံနဲ့ ကျေနပ်နေလို့ မရပါဘူး။ အစည်းအဝေးတွေမှာ Presentation လုပ်ရင်လည်း ရှိသမျှ စာတွေ ပြွတ်သိပ်ရေးထားတာ၊ power point ကို ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်ကြတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းခန့်ဖို့ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါ ကွန်ပျူတာသင်တန်း တက်ထားကြောင်းတော့ Certificate ပေါင်းမြောက်များစွာ တင်လာတတ်ကြပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ရှေ့ထိုးပေးလိုက်ပြီး လုပ်ခိုင်းတော့ Excel တောင် ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်ကြပါဘူး။ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလှမ်းဝေးလို့၊ ပြန်အသုံးမချဖြစ်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကို နားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေ ပေးရတာ ကိုယ့်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ဆိုးတဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေကနေ ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး အောင်မြင်လာကြတဲ့သူတွေကို အားနာစရာတောင် ကောင်းနေပါတယ်။ နားမလည်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာက ကိုယ့်ဆီ မလာရင်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်က ပညာဆီ သွားရမှာပါပဲ။
အသိပညာ ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ နောက်တစ်ခုက အတွေ့အကြုံ။ အတန်းပညာ ဘယ်လောက်မှမရှိပေမဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကတစ်ဆင့် အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေ ကမ္ဘာမှာရော မြန်မာမှာပါ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
အတွေ့အကြုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင်
နံပါတ် ၁ – အတွေ့အကြုံတစ်ခုရဖို့ ပေးဆပ်ရတဲ့ တန်ဖိုးက ကြီးပါတယ်။ ဒါကိုတော့ အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့သူတွေ၊ လူကြီးပိုင်းတွေ သဘောပေါက်ကြမှာပါ။
နံပါတ် ၂ – အတွေ့အကြုံ မရှိရင် ပေးဆပ်ရတဲ့ တန်ဖိုးက ပိုကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Comfort zone ထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာ နေမနေဘဲ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရဖို့အတွက် အသစ်အသစ်သော စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ If the driver feels comfort, he is not driving fast enough ပါတဲ့။ တကယ်တော့ အလုပ်ကနေ ရတာ ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံတွေလည်း ပါတယ်၊ အဲဒါတွေကို ကိုယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သလဲဆိုတာက ကိုယ့်အရည်အသွေးတွေ ဘယ်လောက်တက်လာသလဲ၊ ကိုယ့်ခံယူချက်တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းလာသလဲဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ဆို ဖိအားတွေကို ရင်မဆိုင်ရဲဘူး၊ အခက်အခဲကို ရှောင်ချင်တယ်၊ တတ်နိုင်သမျှ ခပ်အေးအေး နေတယ်၊ သိပ်တာဝန်ယူလေ့ မရှိဘူး၊ အဲဒီအခါ လုပ်သက်ကသာ များလာပေမဲ့ ကြီးကြီးမားမား အတွေ့အကြုံက ရှိမထားဘူး။ ဒါကြောင့် လုပ်သက် နှစ်ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာထက် ဘယ်လောက် အတွေ့အကြုံ ယူနိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
နံပါတ် ၃ – ရခဲ့ပြီးတဲ့ အတွေ့အကြုံကနေ သင်ခန်းစာ မယူတတ်ရင်တော့ ပေးရတဲ့တန်ဖိုးက အကြီးဆုံးပါပဲ။
သူများကို ပိုက်ဆံလွယ်လွယ် ချေးတတ်လို့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ဖူးခဲ့တယ်၊ ခုရော ဘာလုပ်နေလဲ မေးကြည့်တော့ သူ့ပိုက်ဆံချေးပြီး ပြန်မဆပ်တဲ့ လူတစ်ယောက်နောက် လိုက်နေရသတဲ့။
လောင်းကစားကြောင့် ဘဝပျက်မတတ် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ ခု ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ ချဲတွက်နေတယ်၊ ဘောပွဲ လောင်းနေတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဒီလိုလွဲချော်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ရှိခဲ့မှန်းလည်း သိတယ်၊ မှတ်တမ်းလည်း တင်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခု ထပ်လုပ်တော့လည်း အလားတူ လွဲချော်မှုတွေ ဖြစ်လာပြန်တယ်။ ဆိုလိုတာက မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ပြန်အသုံးမချနိုင်ဘူး။ Learning organization မဖြစ်ဘူး။
ခုခေတ်မှာ ပြောပြောနေကျ Lesson learnt ဆိုတာ အဲဒါပါပဲ။ သင်ယူလိုက်ရတဲ့ သင်ခန်းစာများပေါ့။ အတွေ့အကြုံဆိုတာ ရှိဖို့လိုသလို၊ အသုံးချနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
နောက်ပြီး တရုတ်ပညာရှိတစ်ယောက် ပြောဖူးသလို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အမှားအားလုံးကို လိုက်လုပ်ဖူးဖို့အတွက် အချိန်မလုံလောက်ပါဘူး။ မီးကို ပူမှန်း သိဖို့ လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ်က ကိုယ်မသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ယုံမှတ်ပုံအပ်မိလိုက်ရင် ဘဝပျက်တတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်ကြည့်စရာ မလိုတော့ဘူး။
ကိုယ်ကြုံဖူးမှ သိတဲ့ Lesson learnt အပြင် ကိုယ်မကြုံဖူးသေးပေမဲ့ သူများတွေဆီကတစ်ဆင့်သိတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကလည်း အရေးကြီးလာပါတယ်။ အဲဒီသင်ခန်းစာကို အဓိက ရနိုင်တဲ့နေရာကတော့ စာပေပါပဲ။ စာဖတ်ခြင်းကတစ်ဆင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အမှားတွေကို လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ စာဖတ်နာလာတဲ့အခါ အသက် ၄၀ အရွယ်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုမျိုးကို အသက်ခပ်ငယ်ငယ်မှာတင် ရနေတတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်မှာ ကျွမ်းကျင်ရင် ရပြီလား။
အဲဒီမေးခွန်းကို ယေဘုယျဖြေရရင် ဟုတ်ကဲ့ ရပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီအရည်အချင်းချင်း တူလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ စာပိုဖတ်တဲ့သူက ခေါင်းတစ်လုံး ပိုသာပါတယ်။ အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ နောက်ဆုံး သံဃာတော်တွေမှာတောင် စာပိုဖတ်တဲ့သူက (လောကီရေးရာအရ) ပိုအောင်မြင်လေ့ရှိတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ စာဖတ်တဲ့သူက အမြင်ကျယ်တယ်၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား အမှားမျိုးကို မလုပ်တတ်ဘူး၊ စိတ်အထားတတ်တယ်၊ ခံယူချက်မှန်တယ်၊ ပြောတတ်ဆိုတတ်၊ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်တယ်၊ အသင်းအဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်နိုင်တယ်။ စာဖတ်သူတိုင်း မအောင်မြင်ကြဘူးဆိုပေမဲ့ အောင်မြင်သူတိုင်းကတော့ စာဖတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေကြတာ ဒါကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ခေတ်ပညာတတ်ဆိုတာဟာ သက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ ပြင်ပဗဟုသုတတွေကို အချိုးကျကျ ပေါင်းစပ်နိုင်သူကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
San Zuren December 15, 2021 at 10:21 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 27, 2021 at 2:52 AM
နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကိုယ့်တုန်းကမရခဲ့တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့၊ အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာရေးစနစ်နှင့်အခွင့်အရေးတွေရစေချင်တယ်....
Dar Dar December 27, 2021 at 6:07 AM
Kan January 6, 2022 at 8:21 PM
For the younger generation ...Nyo Pyar
Moe nay January 6, 2022 at 11:36 PM
Mon mon December 17, 2021 at 12:51 AM
Neon December 17, 2021 at 2:08 AM
Unknown January 13, 2022 at 4:43 AM
Zin Mar Htwe December 17, 2021 at 11:19 PM
Lynn Thu Aung December 18, 2021 at 4:26 AM
Aye Kyaing December 18, 2021 at 5:11 AM
Njak December 18, 2021 at 9:25 PM
KhantGyi December 18, 2021 at 9:37 PM
NaingWin December 18, 2021 at 11:34 PM
Lynn Thu Aung December 19, 2021 at 5:28 AM
ThuuThuu December 19, 2021 at 9:47 AM
Aye Zaw Thu December 20, 2021 at 3:30 AM
May Pachi December 27, 2021 at 12:03 AM
Kyaw mae yaung December 27, 2021 at 12:03 AM
I am fa. ကျော်မဲရောင် is my fb acc. 😁😁17old😁😁
Tin Tunn Minn December 27, 2021 at 12:05 AM
KyawMyo December 27, 2021 at 12:06 AM
ဆု December 27, 2021 at 12:13 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 27, 2021 at 2:48 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:15 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:23 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:24 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:33 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:38 AM
Sammi December 27, 2021 at 12:40 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:43 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:44 AM
Unknown December 27, 2021 at 12:45 AM
Nyi Nyi December 27, 2021 at 12:48 AM
အမြဲတမ်း click နေတယ်နော်
Sport December 27, 2021 at 12:53 AM
ဒီလိုစာမျိုးကျ အဆုံးထိဖတ်ချင်စိတ် သူ့အလိုလို ဖြစ်မိတယ်။ Thanks.
Unknown December 27, 2021 at 12:54 AM
AK December 27, 2021 at 1:36 AM
mon. star. 7797 December 27, 2021 at 1:37 AM
Unknown December 27, 2021 at 1:42 AM
Nway Oo Mhan December 27, 2021 at 1:43 AM
Thin Thin Swe December 27, 2021 at 1:54 AM
thiha December 27, 2021 at 1:56 AM
nyi hmue thwin December 27, 2021 at 1:58 AM
MML December 27, 2021 at 2:10 AM
Nway Oo Mhan December 27, 2021 at 2:10 AM
Phue December 27, 2021 at 2:15 AM
We must win ✨💜
AUNG December 27, 2021 at 2:20 AM
ခေတ်ပညာတတ်ဆိုတာ ခေတ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ပညာကိုတတ်တဲ့သူလို့ ဆိုချင်ပါတယ်
Thein Soe December 27, 2021 at 2:33 AM
January December 27, 2021 at 2:38 AM
Maloe Mal December 27, 2021 at 2:39 AM
Unknown December 27, 2021 at 2:41 AM
နောင်လာမဲ့အနာဂတ်ကလေးလူငယ်လေးတွေ ပညာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာသေချာတယ် မအလတေရင်
Unknown December 27, 2021 at 2:56 AM
Anonymus December 27, 2021 at 2:59 AM
Gg December 27, 2021 at 3:01 AM
ဒီနေ့ ကြော်ငြာ‌တွေ အရမ်းကြိုက်
Spicy December 27, 2021 at 3:03 AM
Wai G December 27, 2021 at 3:20 AM
Aryone♡ December 27, 2021 at 3:26 AM
Moe Myat Thaw December 27, 2021 at 3:32 AM
aungthushein December 27, 2021 at 3:39 AM
Lady Su December 27, 2021 at 3:40 AM
aungthushein December 27, 2021 at 3:44 AM
Unknown December 27, 2021 at 3:52 AM
M December 27, 2021 at 4:24 AM
Hla Hla Nue December 27, 2021 at 4:48 AM
AUNG December 27, 2021 at 5:16 AM
Myo December 27, 2021 at 5:36 AM
Ishida December 27, 2021 at 5:53 AM
Phyuthan December 27, 2021 at 5:58 AM
Khin Thet Mon December 27, 2021 at 6:03 AM
Ye Zaw Htet December 27, 2021 at 6:03 AM
dipa December 27, 2021 at 6:11 AM
Thet Wai December 27, 2021 at 6:19 AM
Unknown December 27, 2021 at 6:25 AM
Dec 27. 2021 😃
Unknown December 27, 2021 at 6:27 AM
Unknown December 27, 2021 at 7:03 AM
Click on fighting❤💪
Unknown December 27, 2021 at 7:11 AM
နေ့တိုင်း Click နေပါတယ်ဗျ
ChanMyae December 27, 2021 at 7:17 AM
Kyaw1972 December 27, 2021 at 7:44 AM
Unknown December 27, 2021 at 7:56 AM
Unknown December 27, 2021 at 7:58 AM
ko ko zaw December 27, 2021 at 8:03 AM
Unknown December 27, 2021 at 3:23 PM
VIVO December 27, 2021 at 7:54 PM
We must win 👊
Moe Myat Thaw December 27, 2021 at 10:07 PM
Unknown December 27, 2021 at 11:11 PM
Christi Na December 27, 2021 at 11:53 PM
Daw Thwe Thwe Hlaing December 28, 2021 at 2:54 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:11 AM
တကယ်တော့ ခေတ်ပညာတတ်ဆိုတာဟာ သက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ ပြင်ပဗဟုသုတတွေကို အချိုးကျကျ ပေါင်းစပ်နိုင်သူကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။”— Dr. Phio Thiha
အချိန်တွေကိုနှမြောမိတယ်ဆရာ လူငယ်တွေနှင့်လူလတ်ပိုင်းတွေရဲ့ အနာဂတ်တွေ မျှော်မှန်းချက်တွေ မအလ တသိုက်ကြောင့် အကုန်နှောင့်နှေးရတယ်, တကယ်၀မ်းနည်းမိတယ်
Triple K December 28, 2021 at 5:41 PM
Tin Win YTS December 28, 2021 at 9:35 PM
Sammi December 30, 2021 at 7:43 AM
Knowledge = Education + Experience
Asaw December 30, 2021 at 8:40 AM
dawsawhla December 30, 2021 at 9:15 AM
ArrD January 2, 2022 at 8:34 PM
aungthurahtun January 3, 2022 at 12:00 AM
ကလစ်တချက်စီတိုင်းက လိုအပ်​သော​နေရာများအတွက် အ​ထောက်အပံ့ဖြစ်ပါ​စေ
Kyaw mae yaung January 3, 2022 at 4:53 AM
I am faကျော်မဲရောင်is my fb acc .😁😁17old. Add me
Unknown January 4, 2022 at 3:30 AM
hoyfound January 6, 2022 at 7:54 PM
ZawZawHtet January 6, 2022 at 7:57 PM
Unknown January 6, 2022 at 8:02 PM
Unknown January 6, 2022 at 8:11 PM
Unknown January 6, 2022 at 8:20 PM
လူတွေက game တို့ TikTok တို့လောက်ပဲ စိတ်ရောက်နေကြတာ ပြောတော့ အမေ့သား အမေ့သမီးနဲ့ click ကျတော့ လုပ်တဲ့သူကနည်းနည်းလေးရယ်
卂ㄩ几Ꮆ Ҝㄚ卂山 Ҝㄚ卂山 January 6, 2022 at 8:30 PM
Unknown January 6, 2022 at 8:31 PM
Ancro January 6, 2022 at 8:34 PM
so worth to gove time to read...
mintintun January 6, 2022 at 9:06 PM
ယုံကြည်ပါအမှန်တရား အရိုးသားဆုံးလှုပ်ရှား ဒုက္ခနဲ့ကြုံဆုံလာရင်မတုန်လှုပ်ဖူးမဟုတ်လား အမှန်တရားအတွက်ကာကွယ် အမှားယွင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါ မင်း အသက်နဲ့ဘ၀ကိုစွန့်လွှတ်ထားနိုင်မှ
Dar Dar January 6, 2022 at 9:12 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:16 PM
ခေတ်ပညာတတ်ဆိုတာနဲ့ အီလွန်မတ်စ်နဲ့ဇကာဘက်ပဲပြေးမြင်မိနေရာက အက်ဒ်မင်ဂျီးပါရောက်လာပါရော....spacecraft တစ်စီးလက်ဆောင်ပေးနော်..
M January 6, 2022 at 9:20 PM
we can through whatever🎍
Kyaw mae yaung January 6, 2022 at 9:20 PM
I am fa.ကျော်မဲရောင်is my fb Acc.17old. Clickနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်နှစ်ရက်လောက်မclickလိုက်လို့☹☹
Unknown January 6, 2022 at 9:22 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:34 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:57 PM
nyi hmue thwin January 6, 2022 at 10:05 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:22 PM
Love page January 6, 2022 at 10:28 PM
ယခုလို နေ့စဉ်‌နေ့တိုင်း မှန်မှန် ကလစ်ပေးနေကြတဲ့ ညီ အကို မောင်နှမများဟာ သူတော်ကောင်းစိတ် ရှိသူများဖြစ်တယ်လို့။ မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး မိန့်ကြားထားတဲ့
စကားလေးတစ်ခွန်းကို အကြောင်းပြုပြီး ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားထားတဲ့ စကားလေးကတော့
သူတော်ကောင်းစိတ် ရှိသူတွေဟာ လူအများ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်တာ တွေ့ရ မြင်ရ ကြားရရင် မိမိကိုယ်တိုင် ဆင်းရဲ
ဒုက္ခ ရောက်ရသကဲ့သို့ ခံစားပြီး စိတ်နှလုံး မချမ်းမြေ့နိုင်ကြဘူးဆိုတဲ့ စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ညီအကို မောင်နှမ‌‌ေတွဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းများစွာ ရောက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို မကြည့်ရက်နိုင် မမြင်ရက်နိုင် မကြားရက်နိုင်ကြ၍ နေ့စဉ်မှန်မှန် ကလစ်ပေးကြေခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်
သူတော်ကောင်းစိတ် ရှိသူများဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Thi Ha Aung January 6, 2022 at 10:30 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:56 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:59 PM
Freya Phyo January 6, 2022 at 11:45 PM
Unknown January 6, 2022 at 11:49 PM
World Wide January 6, 2022 at 11:54 PM
January January 6, 2022 at 11:56 PM
we click,we support,we win
Than Than January 7, 2022 at 12:13 AM
Unknown January 7, 2022 at 12:22 AM
Thet Aung January 7, 2022 at 12:30 AM
minm99762@gmail.com January 7, 2022 at 12:37 AM
Capt Ye Thu January 7, 2022 at 12:53 AM
ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ဖို့
Unknown January 7, 2022 at 12:59 AM
Very good and knowledgeable 👍👍. Clicked.
Unknown January 7, 2022 at 1:14 AM
Mmt January 7, 2022 at 2:30 AM
Kaung Myat Hein January 7, 2022 at 2:34 AM
Shoon Lai Myintzu January 7, 2022 at 2:57 AM
Su Su San January 7, 2022 at 2:59 AM
Shwe Nyaung January 7, 2022 at 3:15 AM
kono dio da January 7, 2022 at 3:24 AM
မနေ့က ကလစ်ပေမယ့်blogsတခုမှမရ ဘာဖြစ်ပါလိမ့်
kono dio da January 7, 2022 at 3:25 AM
မနေ့က ကလစ်တာblogs တခူမှမရ ဘာဖြစ်တာပါလိမ့်
Chittoo January 7, 2022 at 3:25 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 7, 2022 at 3:41 AM
ကူပါ ကယ်ပါလို့ ငါတို့မပြောချင်ဘူး...
မှန်ကန်တဲ့ ဒိုင်လူကြီး အနေနဲ့
Aungkyaw komoee January 7, 2022 at 7:52 AM
PaPaWaDe January 7, 2022 at 3:55 AM
Unknown January 7, 2022 at 4:37 AM
Yaminn January 7, 2022 at 5:12 AM
Wah Wah January 7, 2022 at 6:07 AM
Saw San Myint January 7, 2022 at 6:17 AM
Unknown January 7, 2022 at 6:52 AM
Unknown January 7, 2022 at 7:47 AM
Unknown January 7, 2022 at 8:01 AM
Wu Yi Fan January 7, 2022 at 8:55 AM
Unknown January 7, 2022 at 9:24 AM
ArrD January 7, 2022 at 9:41 AM
Unknown January 7, 2022 at 6:40 PM
khin Nwe January 7, 2022 at 7:38 PM
Zin Ko Lwin January 8, 2022 at 6:27 PM
Freya Phyo January 11, 2022 at 12:18 AM
Mya Mya Lynn January 13, 2022 at 2:12 AM
Unknown January 13, 2022 at 2:30 AM
မင်းဆိုးမင်းညစ်လက်ထက်မှာ ဝရမ်းပြေးအဖြစ်နဲ့ လိပ်ပြာလုံပါတယ် we must be change
January January 13, 2022 at 2:37 AM
Fighting all clickers
Tin Win YTS January 13, 2022 at 2:40 AM
MoeSwe January 13, 2022 at 2:53 AM
Let's click to support our heroes.
Unknown January 13, 2022 at 3:06 AM
Unknown January 13, 2022 at 3:32 AM
Ni Ni Phoenix January 13, 2022 at 3:34 AM
ဘယ်မင်းမှ မခံနိူင်၊ ပြည်ငြင်းလျှင် ဘယ်မင်းမှ မစံနိူင်။
Unknown January 13, 2022 at 3:57 AM
Unknown January 13, 2022 at 4:09 AM
khoon aoune January 13, 2022 at 4:18 AM
ArrD January 13, 2022 at 4:19 AM
Nwe January 13, 2022 at 4:25 AM
Ko Phyo January 13, 2022 at 4:27 AM
Thet Wai January 13, 2022 at 4:33 AM
Unknown January 13, 2022 at 4:34 AM
Unknown January 13, 2022 at 4:38 AM
Myo Oo January 13, 2022 at 4:51 AM
ငါတို့ နိုင်ကို နိုင်မှာကွ
angelkhine January 13, 2022 at 5:19 AM
Khin Maung Kyaw January 13, 2022 at 5:26 AM
Unknown January 13, 2022 at 5:44 AM
Unknown January 13, 2022 at 6:05 AM
Thz for knowledge
ရေဒီယိုတေ စိတ်ကြိုက်ရွေး January 13, 2022 at 6:05 AM
Nway Oo Mhan January 13, 2022 at 6:22 AM
Hla Hla Nue January 13, 2022 at 6:35 AM
Zin Ko Lwin January 13, 2022 at 6:37 AM
Zaw Htwe January 13, 2022 at 6:47 AM
နောင်မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ပညာရေးရစေချင်တယ် အာဏာရှင်မရှိတော့တဲ့အချိန်ပေါ့
Myothura January 13, 2022 at 7:11 AM
ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲရှိတယ် ၅/တိုင်းသားပါ
MML January 13, 2022 at 7:12 AM
Swan January 13, 2022 at 7:39 AM
Unknown January 13, 2022 at 7:45 AM
Nay Wun January 13, 2022 at 8:43 AM
Khant Min January 13, 2022 at 8:48 AM